WAA LACAG LA'AAN BAADHISTA COVID OO LOOGU TALAGALAY DHAMMAAN REER
Minnesota iyo Adeegyada Caafimaadka Vault waxay iska kaashadeen inay bixiyaan baaritaanka candhuufta ee guriga lagu sameeyo ee COVID-19, qof kasta oo aaminsan inuu u baahanyahay in la baaro, ama astaamo leh ama astaamo la'aan ah, iyadoo aan wax kharash ah ku bixin.
Waxbadan ka baro barnaamijkan ku saabsan Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (MDH) ee Baadhitaanka COVID-19 ee ku yaal guriga macluumaadka bogga.
FARIIMO DHEERAAD AH INTA AADAN BILAABIN KAHOR
Baadhitaan kasta waxa uu u baahan yahay cinwaan iimayl oo gooni ah iyo kootada Vault.Haddii aad isticmaasho iimaylkaaga si aad u dalbato baadhitaanka naftaada, waxaad u baahan doontaa inaad samaysato kooto kale oo leh iimayl gooni ah si aad u dalbato baadhitaanka ilmahaaga (ama xubin kale oo qoyska ah).
Si aad u dalbato baadhitaano badan, waa inaad buuxisaa hal codsi halki marba ka dibna aad ku noqotaa boggan si aad u bilowdo codsiga soo socda.codsiga soo socda.
WAA LACAG LA'AAN BAADHISTA COVID OO LOOGU TALAGALAY DHAMMAAN REER MINNESOTA
Minnesota iyo Adeegyada Caafimaadka Vault waxay iska kaashadeen inay bixiyaan baaritaanka candhuufta ee COVID-19, qof kasta oo aaminsan inuu u baahanyahay in la baaro, ama astaamo leh ama astaamo la'aan ah, iyadoo aan wax kharash ah ku bixin.
WAXAAD U BAAHAN DOONTAA CINWAAN IIMAYL
Baaritaankan candhuufta ee guriga waxaa lagu bixiyaa iyada oo aan wax lacag ah laga qaadin Gobolka Minnesota, lagumana weydiin doono macluumaadka kaarkaaga deynta. Haddii nidaamku ku weydiisto lacag bixin, tani waa qalad; xidh boga dalbashada skuna day markale.
Waxaa lagu weydiin doonaa macluumaadka caymiska haddii aad hayso, laakiin looma baahna si guriga lagu baadho. Baaritaanada waa kuu lacag la'aan. Maheli doontid warqad lacag laguugu soo dalacanayo.
BAARITAANKAN UEWAA KUU LACAG LA'AAN ADIGA
Su'aalaha inta badan la is waydiiyo ee ku saabsan Baadhitaanka Candhuufta Xaga guriga.
Sideen ku helaa baadhitaanka?
Si loo codsado agabka baadhitaanka guriga ee candhuufta, booqobogganoo riixDalbo Baadhitaan. Waxaa lagu waydiin doonaa inaad bixiso macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qofka u baahan baadhitaanka, ay ku jirto magacyadooda, lambarka telefoonka, iyo taariikhda dhalashada. Waxaa sidoo kale lagu waydiin doonaa macluumaadkaaga caymiska, haddii aad hayso iyadda. Baadhitaanka waxaa laguu soo diri doonaa iyaddoon wax kharash kugu joogin, xataa haddii aanad lahayn caymis.
Miyaan u baahanahAy inaan geliyo macluumaadkayga kridhit kaadhka?
Maya. Agabka baadhitaanka guriga ee candhuufta ayaa lagu bixiyaa lacag la’aan oo aan kharash ku joogin dhammaan dadka reer Minnesota. Haddii bogga intirnetka ku waydiiso kaadhkaaga kiridhidka, xidh barowsarkaaga ama bogga oo isku day mar labbaad inaad isticmaasho qaabka gaarka ah ama qaabka aan la aqoonsan.
Run ahaan miyaan u baahanahay cinwaanka iimaylka ee mid kastoo carruurtayda iyo qoyska ah?
Hadda cinwaanka goonida ah ee iimaylka iyo kootada ayaa loo baahan yahay qof kasta oo u baahan baadhitaan. Tan waxay la macno ahaan kartaa inaad u samayso cinwaan iimayl oo cusub carruurtaada yaryar oo dhan iyo xubnaha qoyska ah. Waxaa jira siyaabo badan oo kootooyinka iimaylka bilaashka ah oo aad u isticmaali karto si aad u samaysato kootada Vault iyo inaad hesho natiijooyinka, waxaa iimaylada bilaaskha ka mid ah sida Gmail, Yahoo Mail, iyoi Cloud Mail.
Vault miyay u soo diri doontaa PO Box?
Maya. UPS ma ku soo diri karto agabka baadhida ee COVID-19 cinwaanka Sanduuqa Boostada.
Waxaan ku helay baadhitaankayaga boostada. Maxaan samaynayaa marka xigta?
Soo deji Zoon s aad ugu xidhanto kormeeraha baadhitaanka. Ka dib sii gal qolka sugida onlaynka ah ee Vaultwakhti kasta oo saacadaha baadhitaanka ay jiraan. Waa inaanad waxba cunin, cabin, ama sigaar cabin, ama waxba calaashan ilaa 30 daqiiqo ka hor kullanka baadhitaanka. Saacadaha hawl galka ee kormeeraha baadhidu waa:
Ka dib marka aad qaado candhuuftaada, u soo dir agabkaaga baadhida shaybaadhka addoo isticmaalaya xidhmada UPS ee hore lacagta dirista xidhmada loo sii bixiyo.
Ma qaadan karaan baadhitaankan anoon la samayn wicitaanka Zoom kormeeraha baadhitaanka Vault?
Maya. Si aad u hesho natiijooyinkaaga, waa inaad qaadaa sambalka candhuuftaada asagoo uu arkayo kormeeraha baadhitaanka Vault.
Miyaan u baahanahay ballanka kormeeraha baadhitaanka si aan uga qaado sambalka candhuufta xaga guriga?
Keliyasoo gal qolka sugida onlaynka ah ee Vault wakhti kasta oo saacadahooda badhitaanka jiraan. wax ballan ah looma baahna.
Ma ku samayn karaa baadhitaanka candhuufta xaga guriga in ka badan hal mar?
Haa. Waxaad dalban kartaa baadhitaan kale wakhti kasta.
Miyaan baadhitaanka toos u qaataa, ama kaydiyaa?
Waa inaad toos u qaadato baadhitaanka, xataa haddii aanad qabin astaamaha. Ma jirto sabab lagu kaydinayo baadhitaankaaga ka dib, waxaad si fudud u codsan kartaa mid kale haddii aad u baahan tahay.
Miyaa DNA la qaadaa muddada baadhitaanka?
Maya. Ujeedada keliya ee COVID-19 waa in la go'aamiyo haddii aad qabto.
Miyaan u baahanahay inaan SAMBALKA candhuufta ku rido tallaagada?
Maya. Heerkulayka ma saamayn doono sax ahaanshaha baadhitaankaaga.
Ma isticmaali karaa USPS ama FedEx si aan ugu diro sambalka shaybaadhka?
Maya, waa inaad isticmaashaa UPS, Isticmaal qalabka helida UPS si aad u hesho meesha ugu habboon ee soo dhigida UPS ee sambalkaaga. HA ku ridin sambalkaaga bogoska ku ridida farmasiiga ee UPS - keliya isticmaal goobta muuqata ee UPS ama sanduuqa tooska ay UPS wax ku rido.
Sideen ku heli doonaa natiijooyinkayga baadhida marka ay diyaar noqdaan?
Waxaad ku heli kartaa natiijooyinkaaga labba qaab oo kala duwan:
Haddii aad ku dooratay baadhitaanka iimaylka, waxaad ku heli doontaa iimayl natiijooyinkaaga baadhitaanka.
Haddii kale, waxaad heli doontaa wargelinta iimaylka ah marka natiijooyinkaaga ay diyaar noqdaan si aad uga aragto gudaha kootada Vault. Waxaa jiri doono linkiga natiijooyinkaaga gudaha iimaylkaas.
Miyuu qoyskayga iyo anigu dhammaan baadhitaanka RABA ku jiri karan HAL qol OO isku mid ah oo ZoomKA ah
Waxaanu ku talinaynaa in INAANAD isku baadhin wicitaan isku midka ah ee Zoom adiga iyo xubnahaaga qoysku. Kullanka baadhitaan kasta oo Zoom ah caadi ahaan waxa uu noqon doonaa hal qof wakhtigiiba.
Sababta tani waa in kormeeahaaga baadhitaanka Vault uu ku xidhi doono iimaylka iyo macluumaadka gaarka ah ee la isticmaalay si loo soo galo kullanka baadhitaanka lambarka agabka baadhida gaarka ah. Inkastoo marka laga reebo xaaladaha qaarkood la samayn karo, laakiin qaabka ugu wanaagsan ee lagu xaqiijiyo natiijada baadhitaankaaga waxaa la xaqiijin doonaa marka laguu soo lifaaqo oo waxaa loo habbayn doonaa si degdeg ah, waa ka bixida kullanka baadhida iyo dib u soo gelida qolka sugitaanka Zoom xaga covidtest.vaulthealth.com xubin kasta oo qoyskaaga ah oo safraya. Fadlan hubso in xubin kasta oo qoyskaaga ah ay ku soo gasho baadhitaanka Zoom kootadooda gaarka ah.
MA ISTICMAALI KARAA LUQAD KALE MUDDADA WICITAANKAYGA ZOOM?
Haddii aad u baahan tahaybaadhitaankaaga COVID-19 ee Vault ay kormeerto in lagu qaado luqad kale, fadlan la soo xidhiidha kooxda Waayo khibrada u leh Bukaanka iimayl ahaan covid@vaulthealth.com.Vault waxay leedahay adeegyada turjumaada oo lagu heli karo ilaa 200 luqadood, ay ku jiraan luqadda Dhegoolaha Maraynkanka
Waaxda Minnesota ee Caafimaadka (MDH) iyo Vault Medical Services, P.A. (VMS) waxay wada jir uga shaqaynayaan inay qabtaan ballanta oo bixiyaan baadhitaanada COVID-19 gudaha Minnesota. Inay kaa baadho VMS COVID-19, waa inaad bixisaa macluumaadka gaarka ah ee lagu codsaday foomkan iyo muunada candhuufta. Macluumaadkaaga gaarka ah iyo muunada candhuufta (lagu habbeeyay shaybaadhka) waa xogta gaarka ah ee waafaqsan Xeerka Dhaqamada Xogta Dowladda Minnesota, Sharciyada Minnesota, cutubka 13. Macluumaadkan waa la ururshay markaas waxaa lagaa baadhi karaa COVID-19 oo waxaa lagaala soo xidhiidhi karaa natiijooyinka baadhitaanadaada. Natiijooyinkaaga baadhida iyo xogta kale ee gaarka ah waxaa keliya lala wadaagi doonaa MDH iyo kooxaha kale sida uu sharcigu oggolaado.
Waxaad dooran kartaa inaanad bixin macluumaad, laakiin haddii aanad bixin macluumaadka loo baahan yahay, awood uma yeelan doontid inaad hesho baadhitaanka COVID-19 oo ka yimid VMS. Fadlan ogow, qaadashada baadhitaanka COVID-19 ee VMS maaha qaabka keliya ee lagaaga baadhi karo COVID-19. Tusaale ahaan, waxaad awood u yeelan kartaa inaad qaadato baadhitaanka COVID-19 ee adeeg bixiyahaaga daryeelka caafimaadka kale.